10-kayga Talooyin ee Kusareeya Blog-kaaga | Martech Zone
Axad, Agoosto 13, 2006 Jimco, Juun 19, 2015 Douglas Karr
Computer Shopper ayaa maqaal ku leh Kordhinta Bloggaaga. Maqaalku wuxuu leeyahay talooyin waxtar leh laakiin uma maleynayo inay si sax ah u heleen mudnaantooda mana aysan daboolin dhammaan waxyaabaha muhiimka u ah. Waxaan si isdaba joog ah ugu sii kordhayay taraafikada balooggeyga labadii bilood ee la soo dhaafay. Waxaan si taxaddar leh u cabiray aqristayaashayda, ilaha akhristayaashayda, oo aan ula jaanqaadi jiray si waafaqsan. Waxaan bartay tan tan iyo dhowrkii bilood ee la soo dhaafay.
Waa tan tobankeyga ugu sarreeya:
Ha ka welwelin sida balooggaagu u muuqdo. Kuma raacsani qodobka qodobkaan ku saabsan. Baloogyo badan ayaa aad u fudud, baloogyada waaweyn qaarkoodna waa kuwo fool xun. Dadka waxaa soo jiita tayada qoraalada, ee ma ahan qaab qurxan. Marka laga reebo, dabcan, waa haddii aad wax ka qorto naqshadeynta iyo sawirada.
Saar sawir ama sawirro badan oo naftaada ah goobta. U fiirso sawirka aniga oo ku jira madaxayga iyo sidoo kale sawir aniga About bogga. Blog waa wada hadal lala yeesho akhristayaashaada. Way adagtahay inaad wadahadal yeelato markaad garan waydo qofka aad lahadlayso!
Hubso inaad isticmaasho softiweer kombuyuutar oo leh astaamaha soo socda: dib ufiirinnada, pings, xiriiriyeyaasha, tags, qaybaha, aragtida guud, faallooyinka, raadinta, khariidadaha bogga, ilaalinta spam, raadinta iyo RSS. Baro sida looga wada faa'iideysto dhammaantood. Waan isticmaalaa WordPress. Waxay ubaahantahay xoogaa qalab ah qaababka qaar, laakiin way fududahay in la isticmaalo oo aad u adag. Halkii aan ku martigelin lahaa WordPress, waxaan soo dejistay softiweerka oo aniga qudhayda ayaan martigaliyaa - habkaas ayaan gacanta ugu hayaa barnaamijka, xogta, URL iyo xayeysiinta - waana u habeyn karaa sida aan jeclahay
Saxiix ugu yaraan hal adeeg oo kale ah Technorati si loo kordhiyo soo-gaadhista bartaada. Dadku waxay raadiyaan Technorati iyaga oo u maraya si ay u helaan qoraallo ay aqriyaan.
Markaad hesho baloog aad runtii ka heshay, ku dheji xiriiriye bartaada. Ogeysiis ku samee xiriiriyahayga dhinaca dhinaceyga. Ha noqon mid bashful ah oo weydii akhristayaasha ku raaxeysanaya bartaada si ay kuugu xiraan xiriiriyahaaga. Maaddaama boggag badan oo isku xiraya balooggaaga, balooggaagu uu sii wadi doono kordhintiisa xujo. Tani waxay hagaajin doontaa meelaynta makiinadaha raadinta barta.
Ku billow adeegsiga akhristaha RSS wanaagsan oo bilow inaad ku qorto dhowr boggag kale. Waxaan iska diiwaan galiyaa ilaa 30 hada anigoo adeegsanaya Akhristaha Shaybaarka Google. Waxay la socotaa wixii aan akhriyay waxayna leedahay dhowr astaamo oo kale oo qabow. Waxaan faallo ka bixiyaa inta badan qoraalada kale mar walbana waxaan uga tagaa isku xirka boggeyga. Haddii aan doonayo inaan qoro boosteejo buuxda halkii aan faallo ka bixin lahaa, had iyo jeer waxaan hubiyaa inaan u qoondeeyo raadraaca maqaalkooda.
Ka faa'iideyso qalab falanqeyn wanaagsan. Waan isticmaalaa Google sababtoo ah labadaba waa bilaash waana mid aad u fudud in lagu daro WordPress. Waxaan si fudud u dul dhigay qoraal yar (oo ah alaabada Google) sagxada mawduucayga waana ku fiicanahay inaan tago! Hubinta Falanqayntaada waxay kaa caawin doontaa inaad aragto sida akhristayaasha ay ugu soo socdaan goobtaada, caan ahaanta maqaalladaada, iyo ereyada raadinta ee soo jiidanaya, iwm.
Ka faa'iideyso aaladda quudinta. Waan isticmaalaa FeedPress. Waxay leedahay tan oo astaamo dheeri ah oo leh waxayna kuu ogolaaneysaa inaad cabirto isticmaalka quudintaada. Hal eray oo talo ah, hubso inaad bedesho cinwaanka bartaada cinwaanka RSS. Inta badan qalabka rukunka RSS waxay si fudud uga raadsadaan iskuxirka cinwaanka. Haddii aadan ku beddelin jidkaaga RSS Feedburner, ma qabsan doontid dhammaan macaamiishaas!
Blog badanaa. Boggeyga, waxaan ku ogaanayaa haddii aan qoro 1 ama 2 maqaal maalin kasta in booqdayaashayda laabashada ay sii kordhayaan. Si xiiso leh ayaa ku filan, haddii aan ka boodo maalin waa inaan 'qabtaa' dib u booqashada martida. Haddii aan ka boodo 2, wax yar baa iga lumay. Ka taxaddar inaadan baddeelin badanaa, in kastoo. Waxaan u qori jiray Instapundit, laakiin qodobbada jumlada ah daqiiqad kasta daqiiqado ayaa ii waday nuts si aan isku dayo inaan usii wado. Wuxuu ku guuleystey guulo waaweyn bartiisa, in kastoo. Dadka qaar ayaa ku raaxeysta. Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay mid ka mid ah waxyaabahaas ay tahay inaad la socoto oo aad ku aragto tijaabo iyo qalad. Qodobka kale ee halkan ku yaal ayaa ah waqtigii loogu talagalay. Hubso in markaad maqasho ama aad wax ku aragto mowduuc, aad uga falceliso sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah haddii aad jeclaan lahayd inaad kobciso dhagaystayaashaada. Akhristayaashu waxay raadiyaan inta badan waqtiga dhacdada, kama dambeyso.
Si fiican u qor. Marwalba uma baahnid inaad mawduuca ku sii jirtid balooggaaga. Xusuusnow, balooggu waa wada hadal u dhexeeya adiga iyo akhristayaashaada. Way ku baranayaan adiga waxaadna isku dayeysaa inaad barato iyaga. Sawirro dhowr ah oo ku saabsan fasaxaaga ama eygaaga ayaa u oggolaan doona adduunkaaga wax yar oo qoto dheer waxayna abuuri doonaan xiriir weyn iyaga. Had iyo jeer waxaan waqti ku qaataa maalin kasta oo aan ka fikiro waxa aan ku qoro. Maalinna iima dhaafto wax aan barto, wax u fiirsado, ama wax ka maqlo… markaa waan ku raaxaystaa inaan u gudbiyo akhristayaashayda. Daacad noqo, oo la hadal wixii aad si fiican u qabato.
Marka taasi waa waxa aan bartay illaa iyo hadda. Waan sii wadi doonaa inaan ku sameeyo sixitaanka boggeyga si aan u kordhiyo soo-gaadhista iyo kor u qaadista tayada qoraalladayda. Blogging-ku wuxuu ku saabsan yahay horumar joogto ah.
Waxaan kaloo kugula talin lahaa xoogaa alaab akhris ah… oo aan ugu jeclahay Wadahadal qaawan, laakiin waxaan ka helay liis aad u wanaagsan oo ah buugaag kale oo wax lagu qoro Isweydaarsiga.
Cusboonaysiinta: Ogast 17, 2006 - Waxaa loo gudbiyay ProBlogger's Mashruuca Qoraalka Kooxda ee Liisaska.
Tags: Analyticsnaqshadeynta bartaBloggerhubkaaqaybahacommentsfeedbilaabistainstapunditlinkspermalinkspingsRSSSuuq GoobidgaleeysidSitemapsilaalinta spamtagsfarsamotrackbacks
Agoosto 13, 2006 saacaddu markay ahayd 8:00 PM
Boostada weyn Doug! Si kasta oo doqon ah ay u dhawaaqi karto, waxaan dhibaato ku qabaa nambarka 3. Waxaan hayaa hal sawir oo aan dhigay boggeyga ku saabsan, laakiin Runtii way igu adkaatay inaan sameeyo. Waxaan u dhigi jiray boggeyga si aabahay isla markiiba u xasuusto sababta uu u calaamadeeyay bogga - laakiin waxay iga dhigtay nooc aan raaxo lahayn! Waa inaan sawir kale kor u kacaa. Waad saxantahay - markasta si wanaagsan ayaan uga jawaab celiyaa sawirada - Waxaan jeclahay inaan ogaado qofka aan la hadlayo! (BTW - taasi waa sawir fiican oo ku jira madaxaaga!)
Agoosto 14, 2006 saacaddu markay ahayd 12:54 PM
Waxaad ilawday dhinacyo muhiim ah, oo aan hadda si farxad leh kuusoo kordhin doono si aan u kobciyo boggan wanaagsan.
(1) Naqshadayntu waa wajiga koowaad ee ugu muhiimsan websaydh kasta sida ku cad Stanford Persuasive Tech iyo BJ Fogg, PhD. Haddii ay u muuqato mid qaawan, hiwaayad, fool xun, caajis badan, ilmo, iwm, dadka isticmaala waxay damiin ku qaadan doonaan ilbidhiqsiyo ka dibna dib uma soo noqon doonaan.
(2) Mid hodan ah, dhif ah, Mawduuc la Xiriira.
(3) Matt Mullenweg wuxuu ii sheegay sirtiisa ugu weyni inay tahay inuu la falgalo barta internetka, ka faallooyinka isweydaarsiga, ku dhajinta faallooyinka boggaga kale, ku soo diro boggaga kale macluumaad muhiim ah ama talo, iwm Noqo deris wanaagsan bulshada dhexdeeda.
(4) Kala duwanaansho. Lama filaan lama filaan ah. Tijaabo.
(5) Warbaahin badan: Podcasts, video player embeds, sawiro, farshaxan, kartoonno, garaafyo, jaantusyo, iwm.
(6) Jawaab degdeg ah oo ku saabsan faallooyinka lagu dhajiyay bartaada, si daacadnimo leh oo edeb leh ula dhaqan akhristayaashaada.
(7) Faahfaahinta hore ama Ku saabsan Me, iyo macluumaadka xiriirka ee hore ama foomka boostada websaydhka.
(8) Liistada "qoraallada ugu caansan" ama qaybaha kale ee xiisaha leh ee xiisaha leh, oo ay weheliyaan Qoraaladii Ugu Dambeeyay iyo Archives Bishiiba.
Talooyin kooban oo ku saabsan dhinacyada aan u maleynayo inay muhiim yihiin.
Feb 11, 2007 markay ahayd 3:47 PM
Talo weyn, mahadsanid Waxaan isku dayay inaan qaato taladaada # 7 oo aan adeegsado Google Analytics, laakiin waa inaan qiraa in tilmaamahooda aan loo fahmi karin kuwa aan farsamada ahayn, isticmaalayaasha WordPress sida aniga oo kale. Nolosheyda aniga, ma garan karo meesha aan dhigayo koodhka ay ii sheegayaan waa inaan galiyaa.
Febraayo 13, 2007 saacadu markay tahay 1: 57 AM
Hi Doug, waxaan ku joojiyay bartaada dhowr jeer waana ku raaxeystaa waxa aan ku arko adigoo sameynaya. Waxaad muujisay meelaha muhiimka ah ee naga caawinaya dhamaanteen dib u eegista qalabka aan hada ku isticmaaleyno baloogyadeena. Waad ku mahadsan tahay talooyin wanaagsan.
Feb 13, 2007 markay ahayd 12:09 PM
Aad baad ugu mahadsantahay faallooyinkaaga wanaagsan, Robyn! Waad ku mahadsan tahay booqashadaada !!!
Jun 7, 2007 at 10: 25 PM
Maqaal aad u fiican oo si fiican loo qoray. Magacaygu waa Garry waxaanan wax ku qoraa baloog shaqsiyeed oo bixiya talooyin ku saabsan qorista qorista ee akhristayaasha. Waxaan ka raadinayay Google waxyaabo aan wax ka qoro waxaanan ka helay maqaalkaaga halkan. Shaqo heer sare ah waxaanan hubaa inaan ku bixin doono xiriirin ku saabsan qodobkan qoraalkeyga soo socda. 🙂
Jun 8, 2007 saacadu markay ahayd 7:51 AM
Mahadsanid Garry! Waxaan fiirin doonaa bartaada goor dhaw.
Nov 28, 2007 saacadu markay tahay 2:31 PM
Haa, kani waa degel aad u qabow. 😉
Kaliya waxaan kuugu daray kuwa aan jeclahay.
Jul 26, 2011 markay tahay 8:36 PM
Waa fikrad fiican, waan ogahay inay sidoo kale saameyn weyn ku leedahay matoorada raadinta, iyada oo ay ugu wacan tahay talooyinkiisa